Vaovao - Te hanana fahefana bebe kokoa, fa haingana kokoa? Ity GaN tech vaovao ity dia milaza fa afaka manolotra
Ny andro fitaterana biriky herinaratra goavambe sy tariby maromaro hitazomana ny fitaovanao dia mety ho tapitra. Ny ora fiandrasana ny smartphone na solosainao findainy handoavam-bola, na ny fahagagana amin'ny charger mafana mampatahotra, dia mety ho lasa zavatra taloha ihany koa. Eto ny teknolojia GaN ary mampanantena izy fa hanatsara ny zava-drehetra
"Ny silikone dia mahatratra ny fetrany eo amin'ny lafiny fahombiazany sy ny haavon'ny heriny", hoy i Graham Robertson, mpitondra tenin'ny Digital Trends. "Noho izany, nanampy ny teknolojia GaN izahay, izay singa 31 sy singa 7 natambatra mba hanaovana nitrida galium."
"Ny silikone dia mahatratra ny fetrany eo amin'ny lafiny fahombiazana sy ny haavon'ny heriny."
Ny ampahany "GaN" ao amin'ny GaNFast dia midika hoe gallium nitride, ary ny ampahany "Haingana" dia midika hafainganana hafainganam-pandeha bebe kokoa. Navitas Semiconductors dia mampiasa an'ity fitaovana ity ao amin'ny Power ICs (boriborintany miharo herinaratra), izay amidiny amin'ireo mpanamboatra charger.
"Nametraka sosona amin'ny wafer vita amin'ny silika nentim-paharazana isika ary izany dia mitaky fahombiazana amin'ny haavo vaovao miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingana, fahombiazana bebe kokoa ary hakitroka avo kokoa," hoy i Robertson.
Ny herinaratra dia nitaona aretin'andoha ho an'ny elektronika azo entina hatramin'ny andro voalohany. Na eo aza ny fihazakazaky ny fanavaozana eo amin'ny tontolon'ny teknolojia, nampiasa bateria lithium-ion mitovy izahay, miaraka amin'ny fetrany rehetra, mandritra ny 25 taona izao. Midika izany fa ny ankamaroan'ny fitaovantsika finday dia zara raha afaka mandeha isan'andro nefa tsy mila ampidirina ao.
Ny toerana nahitantsika fanavaozana marobe tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny hafainganam-pandeha haingana kokoa, fa ny fanaterana herinaratra be dia be amin'ny charger nentim-paharazana dia mitaky habe ary mamokatra hafanana marobe, very maina ny herinaratra. Araka ny Navitas, ny GaNFast Power ICs dia manome tanjaka avo 3x avo lenta, tahiry angovo 40 isan-jato lehibe kokoa, ary 20 isan-jato ny vidin'ny rafitra ambany.
Izy ireo koa dia mifanaraka amin'ny Qualcomm's Quick Charge 4.0, izay fahita matetika ankehitriny, ary tokony hitovy amin'ny fiainana bateria finday mandritra ny adiny dimy manomboka amin'ny dimy minitra fotsiny. MiNFast dia miasa miaraka amin'ny famaritana Power Delivery ihany koa, izay ny telefaona mahazatra toy ny Google's Pixel 3 ary ny solosaina finday toa ny Dell's XPS 13 miankina. Na izany aza, tsara ny manamarika fa ny seranana dia afaka manolotra na QC 4.0 na PD, fa tsy izy roa akory no manapaka ny famaritana USB-C PD.